Igwe ihe eji emeghari ihe: Pelleting-Cooling Integrated System, Pelleting-Cooling Integrated Recycling si China na-ebunye ya.
Nkọwa:Ngwongwo ndi ozo,Sistemu Ejikọtara Pelleting-Cooling,Igwe nrụnye igwekota Pelleting-Cooling,,,
Home > Ngwaahịa > Usoro Nhazi > Igwe ọnụ na-eme ka ihe dị jụụ jikọtara ọnụ
Ngwaahịa nke Igwe ọnụ na-eme ka ihe dị jụụ jikọtara ọnụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ngwongwo ndi ozo , Sistemu Ejikọtara Pelleting-Cooling suppliers / factory, wholesale high-quality products of Igwe nrụnye igwekota Pelleting-Cooling R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Pelletizer PVC Akpụkpọaka Akpaaka Automatic  Kpọtụrụ ugbu a
EPDM Ruber Automatic Extrusion Granulator  Kpọtụrụ ugbu a
Autulaic Granulator maka Nnwale Lab  Kpọtụrụ ugbu a
PP PE Automatic Granulation Line  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe eji eme ya na igwe eji eme ya  Kpọtụrụ ugbu a
Roba Granulator ya na sisitemu eji aru oru  Kpọtụrụ ugbu a
Pelletizer PVC Akpụkpọaka Akpaaka Automatic
LINA 70 Pelletizer dị ọtụtụ maka PVC Pellets Lina Plastic ahụ Ịkpọ na Jụrụ Machine nwere dị iche iche pelletizing ụzọ tinyere anwụ n'elu-ekpo ọkụ ọnwụ na ikuku jụrụ, n'okpuru-mmiri pelletizing, mmiri mgbanaka pelletizing, mmiri Strand...
EPDM Ruber Automatic Extrusion Granulator
LINA 65 Plọtizer Multi-arụ ọrụ maka EPDM Ngwunye eriri igwe nke LINA emeputa ma mee ka ihe di nro bu ihe ndi ozo maka otutu roba na ihe eji eme ya. Differentzọ pelletizing dị iche iche dị ka ọnwụ ịkpụ elu na-ekpo ọkụ, ikuku pelletizing, mmiri...
Autulaic Granulator maka Nnwale Lab
LINA 55 Labo Laboratal Laboula Ọrụ LINA Obere nno Grandalation Line e mebere maka otutu roba na igwe di iche na usoro ozo di iche, ma nwuo elu ncha mmiri & ngbanye ikuku, ngbanye mmiri, igbutu mmiri, igbutu mmiri, igbutu ikuku, nko ihe. dịnụ....
LINA 50 Labo laboal plastic Multi-arụ ọrụ Pelletizer Ihe omuma ohuru nke LINA Lab Pelletizing Production Line maka Rubber na Plastic bu na o nwere ike iji ugha ma obu usoro hydraulic mee ka ihe di elu karie ihe ntughari. Usoro ọrụ niile na-aga...
Ihe eji eme ya na igwe eji eme ya
LINA 45 Laboratory Granulation Production Line LINA Automatic Rubber Extrusion Machine na -enweta ihe karịrị ihe karịrị otu igwe ”n’otu sistemu arụmọrụ nọọrọ onwe ya, nke nwere ọgụgụ isi, ịchekwa ike na nchekwa gburugburu. LINA Obere ogo Granulation...
Roba Granulator ya na sisitemu eji aru oru
LINA 30 Plọtizing Integrated Igwe Igwe Nzuzo LINA Automatic Pelletizing Machine na-agbadata ọrụ nke mpịachi granulating na Otu ahịrị dị n ’ụlọ ọrụ nnwere onwe dị. Ngwaọrụ ahụ na-arụ pelletiles ma na-ajụkwa oyi agwakọtara na usoro ya na-aga n’ihu bụ...
China Igwe ọnụ na-eme ka ihe dị jụụ jikọtara ọnụ Ngwa
LINA pelletizing-Cooling Integration pelletizing akara centralizes ọrụ niile nke zuru granulation akara na otu nọọrọ onwe ha na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu. Efficiencyrụ ọrụ pelletizing bụ 1-2 ugboro elu karịa usoro ọdịnala pebtizing nke ọdịnala. Site na njikọta nke njikwa PLC, igwe igwe LINA pelletizing-qabooji na-eme ka usoro granulation dị mfe, mpaghara ọrụ dị ntakịrị, ọnụahịa ọrụ dị ala yana ọnụego mmezi dị ala.
Anakwere nri abuo taper mmanu maka agglomerates metal agwakọtara, usoro nri a karie usoro nri okpukpu okpukpu abua. Ejima taper nri bu ihe eji edozi ihe, ihe ndi ozo n’enye ha edo edo, n’enweghi ihe ndi ozo edo edo. Ngwaọrụ a kapịrị ọnụ maka granulation nke ekweghị ekwe dị elu, ike dị elu na ihe ndị na-eguzogide ihe, gụnyere ntụ ntụ, ntụ ntụ, ndọta, zirconia, seramiiki ntụ ntụ wdg.
Sistemụ ịsa ahụ mmanụ.
Ihe barrel na ihe nchara: 38CrMoALA alloy steel nitride were awa iri asaa na abụọ, rụkwaa carbide n’elu ya.
Plọtizer ụdị pelletizer (nke na-abụghị ihe mkpuchi): Fezọ nri nke plọtizer ụdị plọtizer: hydraulic.
Ihe eji eme ihe: elu - end Inorganic nonmetal like ceconics zirconia.
Ọ dabara na ndọta ụwa na-adịkebeghị, magneto-optical, superconaging, nchekwa hydrogen na alloys ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe.
Ngwongwo ndi ozo Sistemu Ejikọtara Pelleting-Cooling Igwe nrụnye igwekota Pelleting-Cooling